Canada Visa Information - Nepal - Home Page
३ सरल चरणाहरू
क्यानेडियन भिषाको आवेदनका लागि
यहाँहरूलाई नेपाल स्थित क्यानडा भिषा आवेदन केन्द्रको (CVAC) वेबसाईटमा स्वागत छ । भि एफ एस ग्लोबल, क्यानडा सरकारको लागि विशिष्ट सेवा प्रदायक हो, नेपालमा भिषा आवेदकहरूलाई प्रशासकिय सेवा प्रदान गर्न अधिकारप्राप्त छ ।
महत्वपुर्ण सूचना : नयाँ सेवा शुल्क बिहीबार, २ नोभेम्बर २०१७ बाट लागु हुनेछ । भिषा आबेदन बुझाउनु अघि अधावधिक जानकारीकोलागि यो वेबसाईटमा हेर्न यहाँलाई सल्लाह दिईन्छ ।
मिति १९ नोभेम्बर २०१६ देखि लागु हुने गरी‚ भिसा आवेदन केन्र्दले मिति २०१० वा पुरानो संस्करणका आवेदन फाराम बुझ्न असमर्थ हुने छ। १९ नोभेम्बर २०१६ बाट बुझाइएका सबै भिसा आबेदनहरुमा नयाँ संस्करणका फारामहरु समावेश गर्नु पर्नेछ जुन तपाईले आफ्नो यात्राको उदेश्य अनुसार हाम्रो वेबसाइटबाट पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ।
क्यानडाको अध्यागमन, शरणार्थी र नागरीकताको (IRCC) इलेक्ट्रनिक यात्रा प्राधिकरण (ETA) द्धारा हवाईजहाजबाट क्यानडा यात्रा गर्ने विदेशी नागरिकहरु (अमेरीकी नागरिक र अन्य निर्दिष्ट छुट दिइएको यात्रीहरु बाहेक) का लागि नयाँ प्रवेश आवश्यक छ । अनलाईन आवेदन www.Canada.ca/eTA मा उपलब्ध छ ।
महत्वपुर्ण सूचना : नयाँ सेवा शुल्क बुधवार, २ नोभेम्बर २०१६ बाट लागु हुनेछ । भिषा आबेदन बुझाउनु अघि अधावधिक जानकारीकोलागि यो वेबसाईटमा हेर्न यहाँलाई सल्लाह दिईन्छ ।
महत्वपूर्ण अधावधिकः नयाँ सेवा शुल्क २ नोभेम्बर सोमबार देखी लागु हुनेछ । आवेदन बुझाउनु भन्दा पहिला यो वेबसार्इटमा अधावधिक गरीएको जानकारी हेर्न सुझाव दिर्इन्छ ।
०८ अक्टोबर २०१५: राहदानी प्राप्त गर्न ढिला ०२ अक्टोबर २०१५: महत्वपूर्ण घोषणा भिषा जारिगर्ने वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय अध्यागमन, शरणार्थीहरु र नागरीकता क्यानडा को ( IRCC) अध्यागमन अधिकारीद्वारा एकलै लिन्छन् । सम्पूर्ण आवेदनहरू क्यानडाको अध्यागमन भिषा नियमहरू तथा निर्देशनहरू अनुसार मुल्यांकन गरिन्छ । क्यानडा भिषा आवेदन केन्द्रको आवेदन नतिजामा कुनै भुमिका वा हस्तक्षेप हुने छैन र कुनै निर्णायक परामर्श प्रदान गर्ने छैन ।
फर्जी रोजगारीको प्रस्तावहरूबाट सावधान रहनुहोस् । अधिक जानकारीको लागि – यहाँ थिच्नुहोस्
तपार्इको राहदानी बुझाउन
तपाईलाई भिषा आवेदन केन्द्रमा राहदानी बुझाउन भनिएको छ?
के तपाई आफ्नो पहिचानगत विवरण दिन चाहनुहुन्छ ?
तपाईको पहिचानगत विवरण यस/ यिमध्येका एक क्यानडा भिषा आवेदन क्रेन्द्रमा कसरी दर्तागर्ने भन्ने थाहापाउनुहोस् ।
सेवा र सेवा शुल्क तालिका
तपार्इको आवेदन खोज्नुहोस्
यदि तपार्इले पहिलानै भिषा आवेदन केन्द्रमा आफ्नो आवेदन बुझार्इसक्नु भएको छ भने आवेदन विवरण जान्नको लागी
क्यानडा भिषा आवेदन केन्द्र
तपार्इको नजिकको भिषा आवेदन केन्द्र खोज्नुहोस् । कृपया तल आफु बस्ने शहर छनौट गर्नुहोस्
नजिकको केन्द्रहरू छनौट गर्नुहोस् काठमाडौँ